ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ငါဒီ Book မှဝယ်ယူတာပါကျနော်ယုံကြည်လို့မရနိုင်
ငါဒီ Book မှဝယ်ယူတာပါကျနော်ယုံကြည်လို့မရနိုင်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ပင်လယ်. 31 2020 |6မိဖတ်ပြီးသား
ဆယ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း, အဘယ်သူမျှမကလူကိုခရီးဦးကြိုဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကွန်ပြူတာအားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြလိမ့်မယ်. ကောင်းစွာ, ဘာလို့ထင်လဲ? ဒါဟာဖြစ်. ဇန္နဝါရီလ 2002: တကျိပ်တပါးသောလူဦးရေသန်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ. ဇူလိုင်လ 2002: လူတသောင်းရှစ်သန်းလူတွေအွန်လိုင်းမှာချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ. ဒီဇင်ဘာလ 2002: သုံးဆယ့်ငါးသန်းသွားရောက်လည်ပတ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ. မေ 2003: လေးဆယ်ငါးသန်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေသွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ (comScore မီဒီယာ Metrix, New York Times ကို, ဇွန်လ 30, 2003). ကိုအုပ်စိုးစေသည်ကာင့် 40 အမေရိကရှိလူအပေါင်းတို့သည်တခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ရာခိုင်နှုန်း. နှင့်ဤလူငယ်တစ်ဦးသည်လူတစ်ဦး၏အလယ်အလတ်သောအမြင်ပေမယ့်, ချဲ့ထွင်၏အသုံးအနှုန်းများမှာထိပ်တန်းအသက်အရွယ်အုပ်စုအမျိုးသမီးများဖြစ်ပါသည်, သုံးဆယ့်ငါးလေးဆယ်မှလေး, အမျိုးသားများကနောက်တော်သို့လိုက်, သုံးဆယ့်ငါးလေးဆယ်မှလေး. နောက်တစ်နေ့အကြီးမားဆုံးအုပ်စု? အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ, လေးဆယ်ငါးငါးဆယ်မှလေး (Yahoo က, Inc ကို, စက်တင်ဘာလ 2002).
အင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့အင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားခြင်းထက်အသက်ကြီး skews သောအကြောင်းပြချက်ကြည်လင်သော. လူပျိုသုံးဆယ်တဲ့အရာတွေကို busier နှင့်ပိုပြီးငွေရေးကြေးရေးလုံခြုံမှုရှိလေ့, သောအလုပ်ကအရေးကြီးတယ်ကိုဆိုလိုတယ်, သို့သော်ဤမျှချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်, န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းကပြဿနာတစ်ခုမသည်အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်. နောက်ထပ်, သူတို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းအန်ရှိလူများလက်ထပ်ဖို့ဖိအားခံစားနေရတယ်နှင့်ကလေးများရှိသည်နေကြတယ်. အသက်လတ်ပိုင်းအရွယ်ကဏ္ဍ၏ချဲ့ထွင်ဖြစ်စေတစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာအဖြစ်များများစားစားမလာသင့်တယ်. သန်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကွာထွက်ရှိပါတယ်, သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ကလေးတွေနှင့်အတူတက် partying ကိုတွေ့သောအခါငါဘားမြင်ကွင်းတစ်ခုဝေးလျော့နည်းနှစ်သက်စရာကြောင်းခန့်မှန်းရန်ရှိသည်’ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ.
အင်တာနက်ကိုဖြစ်လာသည်ကဲ့သို့များကိုတွင်ကျယ်စွာ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နေတုန်းပဲအစည်းအဝေး၏ပိုပြီးအစဉ်အလာလမ်းကိုလေ့ရှိသောသူတို့သည်လူအစဉ်အဆက်တို့သည်တစ်ဦးရဲရဲတောက်ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်. ဒါပေမယ့်အစည်းအဝေး၏အခြားနည်းလမ်းများပိုမိုမြဲမြံစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသူတို့ကိုပင်ကိုယ်အားဖြင့်ပင်ထက်သာလွန်အောင်မပါဘူး. ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါ. လူသာမန်အားဖြင့်သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုခရီးဦးကြိုပြုအဘယ်မှာရှိ?
ယမကာ? အင်း, သင်ကျိန်းသေအစည်းအဝေး၏ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည် “တဦးကို” သင်အရက်မူးရင်. လူတိုင်းအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးလူအရက်ဆိုင်တွေမှာမှန်မှန်ထွက်ဆွဲထားတယ်လို့သိတယ်. (ကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးသောလူမျိုးတို့၏လောင်းကစားရုံများနှင့်တန်ဆာမှတစုံတခုကိုယူဖို့မဟုတ်ပါဘူး။)
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏? အခမဲ့ဗောနှင့်ကြက်သွန်နီသို့ကျဆင်းလာနှင့်အတူ မှလွဲ. အရက်ဆိုင်များကဲ့သို့ပင်. သင်တို့မူကားအလွန့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုင်မဟုတ်လျှင်, ရဲရင့်, သို့မဟုတ်အချော, ပါတီတစ်ခုမှာနာရီအနည်းငယ်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတက်ကောက်နေအမြဲပြုပါရန်အလွယ်ဆုံးအရာမဟုတ်ပါ. မေးနိုင်ဖြစ်ခြင်း, “သင်ကအိမ်ရှင်ကိုမည်သို့သိကြပါ?” ပါတီများ bars တွေကိုကျော်အနည်းငယ်အစွန်းပေးသည်.
အလုပ်? အချက်အလက်: တစ်ဦးနှင့်အတူလုပ်ဖော်တက်ကိုချိုးဖောက်သင်ယခင်ကအလုပ်အပေါ်များရှိခဲ့ပေမည်နည်းပါးပျော်ရွင်ကျေနပ်မှုမဆိုကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်. ကျွန်မဦးခေါင်း၌လုပ်ကြံမှုများကစစ်တမ်းကောက်အတွက်, 86 လူဦးရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးဖြစ်သူကဲ့သို့တူညီသောရုံးတွင်အလုပ်ထက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရလိမ့်မည်. ဒါကညာဘက်ရှိ interoffice ချိန်းတွေ့ဆန့်ကျင်သူအချို့ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အထောက်အထားင်.
Church တွင်? သင် bar မှာချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ထင်? ဘုရားသခင့အောက်လွှတ်တော်တွင်တစ်စုံတစ်ဦး၏ဂဏန်းဆိုတော့စမ်းကြည့်ပါ, နံနက်ဖေဖေဘေးမှာသင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်မှထိုင်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ: ယေရှုသည်လည်းအဘယ်သို့ပြုလို? ငါသည်ထိုအဖြစ်လည်းအင်တာနက်ကိုထိမှန်င့်ခန့်မှန်းတာပါ.
စီစဉ်ပေးမင်္ဂလာဆောင်? အနည်းငယ်ခေတ်နောက်ကျ, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဒါပေမယ့်ရွေးချယ်မှု၏ဒြပ်စင်ဖယ်ရှားခြင်းကျိန်းသေချိန်းတွေ့တစ်ခုလုံးအများကြီးပိုလွယ်စေတယ်. Big ပေါင်း. တစ်ဦးကဤစောင့်ရှောက်ကြပါစို့ “စဉ်းစားပါ။”
မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်ရက်စွဲများ? ငါသည်ကိုယ်ရှုံးနိမ့်ကိုရွေးထုတ်ပါလိမ့်မယ်, ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
okay, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီမှာဘာပါဘူး? စီစဉ်ပေးအိမ်ထောင်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ကို? လက်ကိုတစ်ဦးကမြန်ဆန်စွာပြသအမေရိကတိုက်များ၏အများစုကိုနေဆဲပို၎င်းတို့၏မိဘများထက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မသမာမှုများချိန်းတွေ့စိတ်ထဲကယုံကြည်ကိုးစားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ’ မသမာမှုများချိန်းတွေ့စိတ်ထဲက. ထိုကွောငျ့, စီစဉ်ပေးမင်္ဂလာဆောင်မှထွက်သည်နှင့်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ကိုအနိုင်ပေး.
လူအပေါင်းတို့သည်လမ်း jokes, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းအပေါ်က options များအပေါင်းတို့ထက်ဝေးလွယ်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်. လွယ်ကူပြီးစျေးပေါသင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြရန်ရန်အသုံးပြုလိုစကားလုံးနှစ်လုံးမဟုတ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောင့်. လုံးဝအဘယ်သူမျှမချဉ်းကပ်နေချိန်တွင်အလားတူငါးဆယ်ဒေါ်လာသင်စနေနေ့ညဉ့်တွင်ဒေသခံတစ်ဦးဘားမှာရေသောက်စေမှုတ်စေခြင်းငှါ,, သင် AmericanSingles.com အပေါ်အတိုင်းအဆမဲ့အီးမေးလ်များကိုခြောက်လရှိသည်နိုင်. နောက်ထပ်, ချဉ်းကပ်လွယ်၏ (သင်က suave Pick-Up လိုင်းရှိသည်စရာမလိုပါ), ထိုကန့်ကွက်မှုလွယ်ကူသည် (အဟောင်းကိုမသောက်-in-the-မျက်နှာအရာပဲကွန်ပျူတာကိုကျော်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး), နှင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မား (ဤဆိုဒ်များပေါ်တွင်လူတိုင်းတစ်ခုတည်းသောကြောင့်,, သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာရှိသည့်ထွက်နေသောအများအပြား bar ကိုနာယကအဖြစ်ဆန့်ကျင်).
သို့သော်, အင်တာနက်ကိုချိန်းတွေ့၏အဓိကအားသာချက်မှာဤသို့ဖြစ်သည်: သင်သူမ၏ / သင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းရှေ့မှာသင်တို့၏အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက် / ရည်းစား / အစရှိသောခေါ်ဆိုခသိရန်လာပြီင်. ဒီသိသာသည်နှင့်ကိုထပ်မံရှာဖွေတူးဖော်ကိုခံထိုက်ပေရဲ့.
ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏အရေးပါပုံကိုသိ. ငါသည်အဘယ်သူ၏ပြင်းထန်သော Live-အတွက်ဆက်ဆံရေးကိုမှုကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းတို့ဆိတ်ကွယ်ရာလဲကျအဆွေခင်ပွန်းသုံးယောက်ခဲ့တယ်. ဒါကြောင့်ငါကငါတို့ရှိသမျှသည် call တစ်ခုကတော့သိမ်မွေ့နက်နဲသောမီးပွားကငြင်းပယ်မဟုပ်ဘူး, “ဓာတုဗေဒ” တစ်ဦးရွက်ပေါက်ဆက်ဆံရေးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်. ကျနော်ဆိုလျက်ပါ၏, သို့သော်, သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကိုလမ်းသင့်တစ်ခုလုံးကိုကနဦးစကားပြောသင်တန်း dictate နိုင်ကြောင်း, သင့်ရဲ့အနာဂတ် interaction က, ထို့ကြောင့်, သင်၏အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာ.
text: “ဟိုမှာ, ငါသည်အ Fred သည်ပေါ့။” Subtext: “ကိုယ်အဝတ်ကိုကြည့်ရှုပါနိုင်သလား?”
ကိုယ်ကအဖျော်ယမကာနှင့်ပါတီများမှာလူတွေ့ဆုံရန်ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခက်ပါတယ်ဘာကြောင့် ပတ်သက်. ဤသီအိုရီရှိသည်. ဒါဟာဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုအလုပ်ဖြစ်တယ်:
ဒါဟာစနေနေ့ညဥ့်အခါင်. ယောက်ျားလေးများ’ ညဉ့်အချိန်၌ထွက်. မိန်းကလေးများ’ ညဉ့်အချိန်၌ထွက်. လူတိုင်းသည် dual-purpose- ရှိပါတယ်(တစ်ဦး) မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားခြင်းနှင့် (ခ) ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်း. သင်ကကောင်လေးဆိုရင်, သင်အိမ်ပြန်အချိန်အများစုကိုလက်ချည်း. ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှစကားပြော, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သင့်ညဉ့်အရှိဆုံးမိန်းမအပေါင်းတို့ကိုအကြည့်သင်သည်ထိုသူတို့၏တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့သတ္တိရှိခဲ့လျှင်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဘယ်လိုပူပြင်းခြင်းနှင့်တပိုင်တနိုင်လောက်သင့်ရဲ့ buddy နဲ့စကားပြောနေတာခဲ့သည်. သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆိုရင်, သင်ဖြစ်ကောင်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခြောက်လုံး slimiest ယောက်ျားတွေ၏မြှူဆွယ်ပယ် fending ညဉ့်ကိုလွန်စေပါဘူး, ကငြင်းပယ်ခံရဖို့ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားနေသော, သင်တို့ထံကတဦးတည်းအပြီး, သူတို့ချက်ချင်းသူတို့ရှာနိုင်မယ့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်ထိခိုက်ဖို့ငါးပေဘားဆင်းသွားလေ၏. Yep, ထုတ်အဲဒီမှာဘောဇဉ်ဈေးကွက်င်, သေးလူအနည်းငယ်ကမဆိုအရည်အသွေးကအစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်. ငါ့သီအိုရီအတွက်ကစားပွဲဒီနေရာမှာင်.
အစဉ်အလာ, ဘားသို့မဟုတ်ပါတီမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုချဉ်းကပ်ဖို့အဲဒီလူရဲ့တာဝန်ကန်. သူကနည်းအမျိုးမျိုး၌ဤလုပ်နိုင်. Pick-Up လိုင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အစကောင်းရှိပါတယ်. တစ်ဦးကအစဉ်အမြဲဤ surefire ဆုရရှိသူကြိုးစားနိုင်ပါ:
“ကျွန်မနို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကောင်းသောအကျင့်ကိုငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ကလေး, သင်ဘယ်လောက်ကိုသောက်သုံးခဲ့ကြ?”
“ငါသည်သင်တို့ကို၏ရုပ်ပုံရှိသည်နိုင်သလား, ဒါကြောင့်ကျွန်မခရစ္စမတ်လိုချင်တာတွေကို Santa ပြသနိုင်? “
“Nice ရှူးဖိနပ်. ငျြလိင်ရှိသည်?”
သင်တို့မူကားအထက်ပါလိုင်းများကိုညွှန်ပြလိုကဲ့သို့ချိုနှင့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့င်လျှင်ပင်, တစ်ဦးသောသူကဲ့သို့, သင်တဲ့အပေါ်ယံအနေအထားကနေမယ့်. သင်နှင့်တူရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့တစ်ခုခုပြောရင်တောင်, “ဟိုမှာ, ငါသည်အ Evan င်,” ကိုယ့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်, သင်တဦးတည်းအရာသည်အလွန်ရှင်းလင်းသောလုပ်နေပါတယ်: သင်သည်သူမ၏ဘောင်းဘီရချင်တယ်. သူမသည်သူကသိတယ်. သင်ကသိ. မည်မျှပင်သင်အိပ်ရာက, ဤအချက်ကိုနဲ့စတင်နိုင်ဖို့သူမမှသင်သည်အဘယ်အရာကိုကျော်ဆောင်ခဲ့.
အခုသင်ဟာပင်ထပ်မံအမှုအရာထားရှိရန်လိုလျှင်, သင်တို့ပင်ထိုအတူဒုတိယသင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုချဉ်းကပ်သည်ဟုဆိုစေခြင်းငှါ,, သူမကောင်းစွာသင်သူမ၏အမျိုးသားတို့၏အဘဖြစ်သွားကြသည်ဖြစ်စေထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်. ပြုံးရယ်သည်မထားပါနဲ့. အဲဒါအမှန်ပါပဲ. ထိုယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ဖိအားအများကြီးင်. သင်သည်သူမသင်နှင့်အတူအိပ်ချင်တယ်င့်လျှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ငါးစက္ကန့်အတွင်းသူမ၏စိတ်ကိုတက်စေသည်ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် factoid ယုံကြည်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်. အမှန်တရားမှာ, ယောက်ျားတစ်ယောက်အမှု၌အဘယ်သူမျှမမြွက်ဆိုရမည်မှာရှိတယ်. သို့သော်ထိုကြိုးစားနေမှသူ့ကိုရပ်တန့်မထားဘူး. ရလဒ်အနေနှင့်, မသက်မသာစကားပြောဆိုချက်တွေကိုထောင်ပေါင်းများစွာအမေရိကအနှံ့သောက်သုံးရေထူထောင်မှုအတွက်နေ့ရက်တိုင်းရာအရပ်ကိုယူ, ပါဝင်ပတ်သက်ပါတီများအားလုံး၏ chagrin အများကြီး, အဖျော်ယမကာစပ် မှလွဲ., အဘယ်သူသည်ပျော်ရွှင်စွာစျေးကြီးထိပ်တန်းဦးရေတိမ်ရက်များတွင်လူတိုင်း၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရေနစ်.
ဟုတ်ပါတယ်, ဤလူသည် / အမျိုးသမီးတစ်ဦး / လိင် / အိမ်ထောင်ပြုခြင်း subtext ၏အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်. အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဤထူးဆန်းမိတ်လိုက်အကအခုန်ခုန်ဖို့ဖိအားပေးခံရ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဘားမြင်ကွင်းတစ်ခုထွန်းကတည်းက. သင်တစ်ဦးစုစုပေါင်းလူစိမ်းအသေးနဲ့ဆွေးနွေးချက်အောင်ဘယ်လိုသိမ်မွေ့သောနိုင်ပါတယ်? လူအများစု, အဖြေဖြစ်ပါသည် “အလွန်မဟုတ်ပါဘူး။”
ဘားသို့မဟုတ်ပါတီမှာတစ်စုံတစ်ဦးကကောက်နေတဲ့ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်ထက်ပိုဘာမှမအပေါ်အခြေမခံအဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်၏. ဘယ်ဟာအစစ်အမှန်ကမ္ဘာချိန်းတွေ့ယူတာပဲအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နှင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စည်းမျဉ်းများ. သင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ကိုဤစာအုပ်ဖတ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်ဘယ်ဟာသည်. သင်တို့မူကားမသိသည်.
ထို Contrast “ကောက်ကိုင်လိုက်သည်” နှေးနှင့်အတူ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းလမ်းနှင့်လည်းသင်တို့သည်ငါ၏မိတ်ဆွေ Teresa- ဟာတူတက်အဆုံးသတ်နိုင် (အသစ်တစ်ခုကိုအင်တာနက်ချိန်းတွေ့သို့ကူးပြောင်း), အဘယ်သူသည်မကြာသေးမီကဖုန်းပေါ်မှာငါ့အားမိန့်: “အတိတ်၌ငါကြားဆက်ဆံရေးသို့ရပြီးတော့ချိန်းတွေ့ခဲ့သူတစ်ဦးသိမှရလိမ့်မယ်. အခုတော့ငါတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့စတင်ရှေ့တော်၌ထိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသိရပါတယ်။” Trite, ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့. မကြာခဏဘယ်လိုသင်ဘားမှာတစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံကြ, ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနမ်းဆည်းပူး, ပြီးတော့တဆက်တည်းပထမဦးဆုံးနေ့စွဲကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြောင်းသင်ယူခြင်းစတင်? တစ်စုံတစ်ဦးကပင်သင်တို့အနှစ်ဦးလိုက်ဖက်သောခဲ့ကြသည်ရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲဆွဲဆောင်မှုကြောင့်သင်သည်ဆက်ဆံရေးသို့အကြိမ်မည်မျှ dived ပါပြီ? ပိုပြောသွားတာကထားရန်, ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကပင်သူ၏မျက်စိ၏အရောင်ကိုမသိဘဲသူတစ်ဦးဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့မမူသော? သို့မဟုတ်သူမမောင်နှမရှိပါတယ်ရှိမရှိ? သို့မဟုတ်ကြီးပွားသည်ကလေးများ? ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်ရှည်စွာသူလူမည်းထဲကထွက်ဖြစ်ခဲ့သည်င်?
အရှက်မရကြဘူး. ဒါဟာလူ့သဘောသဘာဝကိုခေါ်မယ်. ဒါပေမယ့်တကချစ်စရာလူစိမ်းနှင့်အတူအိတ်ထဲသို့ခုန်ချချင်တယ်မှပုံမှန်င့်ကြောင့်ဆိုသော်, ယုတ္တိဗေဒထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူအမြဲတမ်းရေရှည်ဆက်ဆံရေးအရှိဆုံးအစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုမဆောက်ဘူးဆိုထားသည်. ထိုသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှပြီးနောက်င်အဘယ်သို့သောင့်, မဟုတ်ဘူးလား? ကောင်းစွာ, မဟုတ်ဘူးလား?